ကြီး ၂ ကြီး(မျိုးမြင့်ချို)
အလုပ်ရှိမှ ဝမ်းဝ ခါးလှ(မျိုးမြင့်ချို)
၁ ရက် ၁ လစာ ဘဝအမောများ(မျိုးမြင့်ချို)
စစ်ထွက်ဆရာကြီးတွေ ဘာလုပ်နေသလ (ဌေးလွန်း)
at 5:46 PM Posted by myo0comments
ဒီနေ့ လင်းကြက်မတွန်မီကတည်းက အလုပ်သွားဖို့အိမ်မှထွက်ရပြီး နွားရိုင်းသွင်းချိန်လွန်မှ အိမ်ပြန်ရောက်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အကြို မိတ်ဆက်သင်တန်း ပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီဘက်မှဆိုင်ရာလူတွေသာ အလှည့်ပြောင်းသွားကြသောည်လည်း ကျနော် အထိုင်စကားပြန် ဘာသာပြန်အဖြစ် အသုံးတော်ခံရပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မဟုတ်သော်လည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
အလုပ်သမားသစ်အားလုံး ဗမာစကားတတ်ကြသည့်အတွက် ကျနော် အသက်ရှူချောင်ပါသည်။ အားအကုန် အသံအကုန် လျော့ပါသည်။ ဗမာလို မဆိုစလောက်လေးတတ်ပြီး ပိုးကရင်စကားကိုထုံးလိုမွှေ ရေလိုနှောက်သည့် ကရင်အမျိုးသားတယောက်အတွက် ဗမာ-ကရင် ၂ ဘာသာတတ်လူတယောက်နှင့် ဘေးတိုက် နေရာချပေးနိုင်သဖြင့်လည်း Three Ways Interpretation အတွက် အချိန် သိတ်မဖင့်ဘဲ ကိစ္စအပြီးမြောက်မြန်ခဲ့ပါသည်။
စာတလုံးမှမတတ်သော်လည်း စကားအထအန ကောက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ကြေလည်အောင် ဖြည်ပြ ဖျဉ်ပြခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ မိမိဇနီး၏ အမည်ရင်းမသိသူအားလည်း သင်တန်းချိန်တွင်းဖြစ်သော်လည်း သူ့ဇနီးအား ချက်ခြင်းဖုန်းဆက်ပြီး မေးမြန်းခွင့်ရသဖြင့်ုနှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ပေါင်းသင်းလာခဲ့သည့် မိမိဇနီး၏နံမည်ရင်းကိုလည်းကောင်း အင်္ဂလိပ်လို မည်သို့စာလုံးပေါင်းရသည်ကိုလည်းကောင်း သူ သိခွင့်ရသွားပါသည်။ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှင့် အလွတ်ကျက်ခိုင်းသဖြင့် ထိုခင်ပွန်းသည်လည်း သူ့ဇနီး၏အမည်အင်္ဂလိပ်လိုစာလုံးပေါင်းကို အသေမှတ်မိသွားပါသည်။
လက်ထဲတွင် အိုင်ဖုန်း ၇ ကိုင်ထားသော်လည်း ကိုယ့်ဖုန်းနံပတ်လည်း မသိ၊ မည်သို့ရှာရမှန်းလည်းမသိသူတယောက်အား အခြားသူတယောက်၏ဖုန်းကိုခေါ်ခိုင်းပြီး ထိုသူ့ထံတဆင့်ပြန်မေးကာ သူ့ဖုန်းနံပတ်အားရှာပေးလိုက်နိုင်သဖြင့် သူလည်း သက်မချနိုင်သွားပါသည်။ ထမင်းစားခန နားချိန်တွင် ထိုသူက ဒါ ငါ့ဖုန်းနံပတ်ဟု လူတိုင်းအား လိုက်ပေးနေပြနေသည်ကို တွေ့ရသည်မှာ စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းဝလို စိတ်မကောင်းစရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်အိမ်လိပ်စာမသိသူ ၂ ယောက်အားလည်း အမှတ်ရလွယ်နည်းလေးများ ပြပေးလိုက်သဖြင့် အဆင်ပြေသွားပါသည်။
ဘဲဂလော် (မဲလ)ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ရောက်လာသူအများစုနေထိုင်ကြသည့် အပါ့တ်မင်န့်ကွန်ပလက်စ်ကြီး၏အမည်မှာ Autumn Wood ဖြစ်သော်လည်း ဘဲဂလော်စုဟုပဲ သူတို့ပြောကြပါသည်။ ဘယ်အပါ့တ်မင်န့်မှာနေသလဲဟုမေးလျှင် အာတမ်ဝုဒ်ဟု သူတို့ မပြောတတ်ပါ၊ ဘဲဂလော်စုဟုသာပြောပါ။ East Wood Pointe ဟုခေါ်သည့် အပါ့တ်မင်န့်ကွန်ပလက်စ်ကြီးတွင်ကား အုန်းပြန့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှ လာကြသူအများစုနေသဖြင့် အိစ်ဝုဒ်ပွိုင့်တ်အပါ့တ်မင့်န့်ဆိုလျှင် မည်သူမှမသိပဲ အုန်းပြန့်စုဆိုလျှင် လူတိုင်း တန်းကနဲသိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိပ်စာမေးသည့်အခါ ဇစ်ပ်ကုဒ်ဖြည့်ရန်လိုသည့်အခါ ကျနော်က အုန်းပြန့်စုကလား ဘဲဂလော်စုကလားဟုမေးလိုက်လျှင် အလွန်မြန်ဆန်ပြီး တာသွားပါသည်။ မျက်နှာဖြူသင်တန်းဆရာတွေ ဒါကို သဘောမပေါက်ဖြင့် ရှင်းပြတော့ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ရယ်ရယ်မောမောနှင့် နင်ကရော ဘယ်အစုကလဲဟုမေးပါသည်။ လာတာကတော့ အုန်းပြန့်ကပဲ ဒါပေမယ့် ရောက်တည်းက အဲ့အစုတွေမှာမနေခဲ့တော့ ဘယ်အစုကလို့ပြောလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့် ငါက ဗမာပြည်ကလာပြီး အမေရိကန်စုမှာနေတာဆိုတော့ ဘာရ်ရိကန်စုကပေါ့ဆိုတော့ သူတို့ ဝါးလုံးကွဲရယ်ကြပါသည်။
ထို့နောက့် Safety Orientation ခေါ် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရေးကဏ္ဍသို့ ဆက်စခန်းသွားကြပါသည်။ သင်တန်းဆရာမှာ အမေရိကန်လေတပ်တွင် လေယဉ်စက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် အနှစ် ၂ဝ (တန်းပြည့်စစ်မှုထမ်း)ပြီးထွက်လာသည့် တပ်ထွက်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မှ ပင်စင်အပြည့်ဖြင်ထွက်လာပြီး ယခုကုမ္ပဏီတွင် စက်ရုံဝင်းကြီးတခုလုံး၏ ဘေးကင်းရေးအင်ဂျင်နီယာအဖြစ် အလုပ် လုပ်နေသူဖြစ်ပါသည်။ အရပ်ရှည်သလို စိတ်လည်းရှည်ပြီး ဗမာပြည်သားတွေကို ခင်မင်ပါသည်။ သူ့ အိုရီရင်န်တေးရှင်န်းအတွက် စကားပြန် ဘာသာပြန်လုပ်ပေးနေရင်း တနေရာရောက်တောပ့ စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စက်ယန္တယားများ ယဉ်များ စက်ကိရိယာများ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်လုပ်နေရသည့်အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်နေသည့်အချိန်တွင် နားကွင်း နားဆွဲ ဆံထိုး ဆံညှပ် နာရီ လက်စွပ်များ ဝတ်မထား ပတ်မထားကြရန်ပြောပါသည်။ နားတွင်ကပ်၍ပန်ထားသည့် နားကပ်တော့ရပါသည်၊ ကျန်တာများ ခွင့်မပြုကြောင်း လူအတွက် အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ချွတ်ထားကြရန်လိုကြောင်း၊ အိမ်မှ ပတ်လာဝတ်လာခဲ့လျှင်လည်း အလုပ်အဆိုင်းမစခင် အားလုံးချွတ်ပြီး လော့ကာများထဲတွင် ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်အဆိုင်းပြီး၍ အိမ်ပြန်ချိန်ကြ ပြန်ဝတ်နိုင် ပတ်နိုင်ကြောင်းပြောတော့ မိန်းမငယ်လေးတယောက် လက်ထပ်လက်စွပ်ရောဟုပေးပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာဆရာက ငါလည်း အိမ်ထောင်သည်ပါ ငါဝတ်မထားပါဘူး၊ လူတွေအားလုံး အလုပ်လာတုန်းကလို အလုပ်ကအပြန်လည်း အဲ့အတိုင်းပြန်စေ့ချင်ပါသည်၊ ဘယ်လူတယောက်ကိုမှ ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်သွားတာမျိုး ငါမမြင်ရက်ပါ၊ ဒါ့ကြောင့် မိမိအိမ်ထောင်ရှိမှန်း ဖော်ပြချင်စိတ်ရှိငြားလည်း အလုပ်ချိန်ရှစ်နာရီအတွင်း အိမ်ထောင်သည် ဖြစ်မှန်းကို လက်စွပ်ဖြင့်မဖော်ပြဘဲ အခြင်းခြင်း နှုတ်ဖြင့်ပြောလည်းရပါသည်ဟုဆိုပါသည်။
ဆက်ရှင်းရင်း တနေရာရောက်တော့ ဆံပင်ရှည်သမားများ ဆံပင်ကို ပြည်မကျအောင် လျှောမကျအောင် ချည်ထားထုံးထားရပါမည်၊ အကယ်၍ ထုံးမထားချည်မထားလိုလျှင် ဆံပင်တိုညှပ်ကြတာကောင်းပါသည်၊ ဆံပင်ရှည်ကြီး တဖါးဖါးနှင့်လုပ်ရင်း စက်ထဲဆံပင်ညှပ်ပါသွားပြီး ဦးရေးတပြားလုံးစုတ်ပြတ်ကာ တသက်တာဒဏ်ရာရသွားသည့် အမျိုးသားတယောက်အကြောင်း ဥပမာပေးပြီး ရှင်းပြပါသည်။ သူက ဆံပင်ရှည်များ ချည်ထားထုံးထားပါ၊ မချည်ချင်မထုံးချင်လျှင်ဆံပင်တိုက ပိုအဆင်ပြေပါသည်ဟုဆိုသည်တွင် ကွိုင်ကစပါသည်။
အင်္ဂလိပ်လိုလည်း နည်းနည်းပြောတတ်သည့် နားလည်းလည်သည့် ဆံပင် ခါးလည်ခန့်ရှိသောမိန်းကလေးက Then I will have to cut my hair. ဟု ဝမ်းနည်းသံဖြင့်ပြောပါသည်။ သူဆံပင်ရှည်ကို မြတ်နိုးတနာရှိမှန်း ကျနော်ရော သင်တန်းဆရာရော ခံစားနားလည်ပါသည်။ ထို့အတူ သူ ဘာပြောချင်မှန်းကို ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ သင်တန်းဆရာက မင်းဆံပင်တွေကို အလုပ် လုပ်နေချိန်မှာ ပြည်မကျအောင် စည်းစားချည်ထားရင်ရပါတယ် ညှပ်စရာမလိုဟုပြောတော့ မိန်းကလေး ငါက ဆံပင်တွေကို ခုအတိုင်း ဖားဖားကျနေတာ ဖွားဖွားလွင့်နေတာကိုပဲကြိုက်တယ် ချည်ထားရတာကိုမကြိုက်ဘူး၊ နောက်ပြီး ချည်ထားရင် နာလည်းနာတယ်ဟု ဗမာလို စောဒကတက်ပါသည်၊ ကျနော်က သင်တန်းဆရာကိုဘာသာပြန်ပေးတော့ ဖားဖားကျနေလို့မရပါ ဖွားဖွားလွင့်နေလို့မရပါ။ စည်းထားချည်ထားပါ။ မစည်းထားမချည်ထားချင်ဘူးဆိုရင် ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ်လို့မရပါ။ ဒါဟာ ကုမ္ပဏီက (စက်ရုံက)သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျန်းမားရေးနဲ့ ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာပေါ်လစီကိုဆန့်ကျင်ရာ ချိူုးဖေါက်ရာရောက်ပါတယ်။ လက်မခံနိုင်ပါဟုဆိုတော့ ကောင်မလေး ပိုဝမ်းနည်းသွားပုံပေါ်ပါသည်။ မျက်နှာမကောင်းပါ။ ကျနော်လည်း စိတ်မကောင်းပါ။ သို့သော် ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါ။ သို့ဖြင့် သင်တန်း ဆက်သွားကြပါသည်။
ဤနေရာတွင် ကျနော့်တွင် ကောင်မလေးအားပြောချင်တာ ရှိလာ ပေါ်လာပါသည်။ သို့သော် သင်တန်းနှင့်မဆိုင်သဖြင့် ပြောမဖြစ်ပါ။ ဒါနှင့် ထမင်းစားချိန်ကြ ဦးမျိုးမြင့် ပြောစရာရှိတယ်ဟုပြောပြီး ဖြတ်လိုက်ပါသည်။
ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ သူတယောက်တည်းထမင်းစားနေသည့်နေရာသွားပြီး ဆံပင်ကိစ္စကတော့ ညည်းရှင်းသွားပြီထင်ပါတယ်ဟု ပြောတော့ ရှင်းတယ်ဦးလေး၊ ဦးလေး ဘာပြောချင်တာလဲဟုမေးပါသည်။ ဒီလို ဦးမျိုးမြင့်က အိမ်မှာ လျှပ်စစ်ဆံပင်ညှပ်စက်လေးရှိတယ်။ ဆံပင်ကလည်း ဂတုံးကေထားတာဆိုတော့ မှန် ရှေ့တချပ်နောက်တချပ်ထားပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရိပ်လိုက်တာပဲ။ အဲ့ဒါကို I shave my hair or I cut my hair. လို့ပြောလို့ရတယ်။ အဲ့သလိုပဲ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားတောထွက်တော့ အနော်မာသောင်ကမ်းမှာ သူ့သံလျက်နဲ့ သူ့ဆံပင် သူကိုင်ဖြတ်တာကိုလည်း He cut his hair. လို့ပြောလို့ရတယ်။ သဘောက ကိုယ့်ဆံပင် ကိုယ့်လက်နဲ့ ပြန်ဖြတ် ပြန်ညှပ်တာ။ သူများက ဖြတ်ပေး ညှပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူများက လာဖြတ်ပေးညှပ်ပေးတာ၊ သူများဆီသွား အဖြတ်အညှပ်ခံတာဆိုရင်တော့ အဲ့လိုပြောလို့ မရတော့ဘူးကွဆိုတော့ ကျနော့်ကို အထူးအဆန်းသတ္တဝါတကောင်တော့ လာတွေ့နေပြီဆိုသည့်အကြည့်နှင့်ကြည့်ပါသည်။
ဒါနှင့် ဘောလ်ပင်န်စာရွက်ထုတ်ပြီး ကိုယ့်ဆံပင်ကို ဆိုင်သွားညှပ်တယ်ဖြတ်တယ်၊ သူများက လာညှပ်ပေးဖြတ်ပေးတယ်ဆို I have my hair cut or I have my hair shave. လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့ ဟင်..တခါမှမကြားဖူးဘူးဟုပြောကာ သမီးကို အဲ့ဒီစာရွက်လေးပေးပါလားဟုပြောပါသည်။ ဒါနှင့်သူ့လက်ထဲ အဲ့စာရွက်လေးပေးလိုက်ပါသည်။ ဒါဆို သမီးက ငါဆံပင် ညှပ်ရမယ်ဆိုရောဟု ထပ်မေးပါသည်။ ဒါဆို I will/shall have to have my hair cut တို့ I am going to have my hair cut. တို့ I am supposed to have my hair cut. တို့ စတာတွေနဲ့ အလှည့်သင့်သလို ကြည့်ပြီးပြောပေါ့ဆိုတော့ မျက်နှာတချက် လက်ကနဲဖြစ်သွားပြီး အိုကေ သဘောပေါက်ပြီ၊ ကျေးဇူး ဦးလေး၊ ထမင်းစားပါဦး အမဲအူစုံအသည်းစုံချက်လေဟု ပြောပါသည်။ ကျနော် စားချိန်မရတော့သဖြင့် နောက်မှဟုပြောကာ အခန်းထဲပြန်ခဲ့ပါသည်။ ကျနော် ဝမ်းသာပါသည်။ သူလည်း ဝမ်းမြောက်မည် တွေးပါသည်။
မျိုးမြင့်ချို။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂ဝ၁၇